Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Ingxelo entsha ye-WTTC ibonelela ngezindululo zotyalo-mali kutyelelo lwasemva kwe-COVID kunye noKhenketho
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Theme Parks • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UJulia Simpson, uMongameli we-WTTC kunye ne-CEO
Icandelo loKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho lihlupheke ngaphezulu kunayo nayiphi na enye ngenxa yezithintelo ezinzima zokuhamba.
Igalelo lezoKhenketho noKhenketho kwi-GDP yehlabathi yehle isuka phantse kwi-9.2 yezigidi zeedola ngo-2019 ukuya kwi- $ 4.7 trillion ngo-2020.
Utyalo-mali lwe-capital lwehle ukusuka kwi-986 yezigidigidi ngo-2019 ukuya kwi-693 yezigidigidi kuphela ngo-2020.
I-World Travel & Tourism Council (i-WTTC) isungule namhlanje ingxelo entsha ebonelela ngezindululo zotyalo-mali koorhulumente nakwindawo eziya kuzo, njengoko zijolise ekwakheni nasekukhuliseni icandelo labo loKhenketho noKhenketho.
Xa ubhubhane uzisa ukhenketho lwamazwe aphesheya phantse kwaphela, icandelo lezoKhenketho nezoKhenketho kwihlabathi liphela lihlupheke ngaphezulu kwayo nayiphi na enye ngenxa yothintelo olukhulu lokuhamba.
Igalelo lecandelo kwi-GDP yehlabathi lihle ukusuka kwi-US $ 9.2 trillion ngo-2019, ukuya kwi-US $ 4.7 trillion ngo-2020, emele ilahleko ephantse ye-US $ 4.5 trillion. Ngapha koko, njengoko ubhubhane ugqobhoza entliziyweni yeli candelo, i-62 yezigidi ezothusayo zohambo kunye nemisebenzi yoKhenketho ilahlekile ngelixa uninzi lusesemngciphekweni.
Ingxelo ityhila ukuba utyalo-mali lweemali ezinkulu lwehle phantse ngesinye kwisithathu (i-29.7%) kunyaka ophelileyo, ukwehla ukusuka kwi-US $ 986 yezigidigidi ngo-2019, ukuya kuthi ga kwi-US $ 693 yezigidigidi kwi-2020 kwaye ngoku, njengoko sisiya ekubuyiseleni, utyalomali kuKhenketho noKhenketho khange ugxeke kangako.
le WTTIphepha le-C libonisa indlela ekubaluleke ngayo ukuba zombini indawo kunye noorhulumente batsale utyalomali ngommandla osebenzayo, kubandakanya inkuthazo enje ngerhafu efanelekileyo, imigaqo-nkqubo yokuququzelela uhambo, ukwahluka, ukudityaniswa kwezempilo nococeko, unxibelelwano olusebenzayo, kunye nabasebenzi abanezakhono nabaqeqeshiweyo.
Ingxelo ikwabonelela ngezindululo eziphambili koorhulumente nakwindawo ekuyiwa kuzo kwaye ibalaselisa la macandelo anokuba nomtsalane kubatyali mali.
UJean-Marie Delort uthi:
NgoSeptemba 17, 2021 kwi-04: 11
Ixesha elitsha kunye neshumi leminyaka! Ihlabathi liyatshintsha kwaye kufuneka silungelelanise nolu tshintsho. Ngelishwa ayinguye wonke urhulumente olandela iTrends. Ukuhamba kwabahambi nge-3S ukukhangela, ngaphambili kwakunguLwandle, iLanga kunye neNkonzo kwaye kule mihla uncumo, uKhuselekile, uzinzo.